Nepalistudio » स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा चलाकको मृत्यु स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा चलाकको मृत्यु – Nepalistudio
स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा चलाकको मृत्यु
सिरहामा शुक्रबार भएको दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। सिरहाको चोहर्वा-सिरहा सडक खण्डअन्तर्गत नरहा गाउँपालिका ५ बलुवा चोकनजिक स्कूल बसको ठक्करले ३७ वर्षीय मो. रहमान खानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार मृतक खान सिरहाको औरही गाउँपालिका ४ इँटाटारका बासिन्दा हुन्।जिल्ला सदरमुकाम सिरहाबाट चोहर्वातर्फ आउँदै गरेको बा.१ ख ६८८५ नम्बरको स्कुल बसले स. ७ प ९७३८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक खान गम्भीर घाइते भएका थिए। गम्भीर घाइते भएका खानलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि गोलबजार ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो।
खानसँग मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका ३६ वर्षीय अन्जार खान घाइते छन्। उनको गोलबजारस्थित भूमिजा अस्पतालमा उपचार गरी थप उपचारका लागि विराटनगरस्थित न्यूरो अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ।
मोटरसाइकल र ठक्कर दिने बस प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र फरार बस चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक खानको शव पोष्टमार्टमका लागि लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पताल ल्याइएको छ।